कर्णालीमा एक्सरे विग्रिदा ...: निक साइमन्स इन्स्टिच्यूट
28 Mar, 2018 By: उत्तम पोखरेल
कुरा २०७२ चैत्र २० गतेको हो । मुगु जिल्लाको रुवा गाविस. वडा नं. ३ की २६ वर्षीय मनमायाँ वुढा नजिकैको जंगलमा घाँस काट्न रुखमा चढिछन् । तर खुट्टाले भर नदिएपछि भुइमा वजारिइछिन् । केही घण्टापछि उनको होस त आयो तर उपचारको लागि गुहार माग्न नजिकै कोही थिएन ।
साँझसम्म पनि मनमाँया घर नफर्के पछि उनका श्रीमान् गणेश वुढा उनको खोजखवरीमा निस्किए । साँझको ७ वजे तिर उनका श्रीमान्ले उनलाई नजिकैको जंगलमा इन्तु न चिन्तु अवस्थामा भेटे । अघिसम्म श्रीमतीको खोजीमा मात्र भौतारिएका उनलाई अव श्रीमती वचाउने जिम्मा समेत थपियो ।
जस्तो सुकै आपत्कालिन केस भएपनि काठमाण्डौ ल्याएर उपचार गर्नु मुगुवासीको लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह हो । जुम्लाको सदरमुकामस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै उनीहरुका दिमागमा आउने विश्वासको मानक हो । त्यसैका लागि उनी केही पैसा र डोकोको जोहो गरेर हिडे ।
दुई दिनको पैदल यात्रा पछि डोकोमा श्रीमती वोकाएर गणेश वुढा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला पुगे । मनमायाँको एउटा खुट्टा पुरै नचल्ने अवस्थामा थियो । रक्तश्राप भने पहिले नै रोकिएको थियो । सो केसलाई अस्पतालले गम्भीर रुपमा लियो । अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको टोली तत्काल उपचारमा खटिए । प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँचपछि उनको तिघ्रा (femur) को एक्सरे गनुपर्ने भयो । किनकी एक्सरे प्रतिवेदन हेरे पछि मात्र आवश्यक उपचार निक्र्यौल गरिन्छ । त्यसैले उनलाई एक्सरे गर्नको लागि सो विभागमा लगियो । तर दुर्भाग्य, एक्सरे मेसिनले काम गरेन । त्यसपछि एक्सरे विभागका प्रमुखले मलाई फोन गर्नुभयो सो मेसिनको समस्याको निराकरण गर्न । त्यतिवेला म कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा वायोमेडिकल इक्विपमेन्ट विभागमा काम गर्थे ।
म हतारिदै एक्सरे विभागमा पुगे । पावर सप्लाई देखि चेकजाँच गर्दै गए । लामो मेहनत पछि पत्ता लाग्यो एक्सरे मेसिनको एक्सरे कन्ट्याक्टर भन्ने भागले काम गरेको थिएन । जुम्लामा नियमित सहि विद्युत भोल्टेज वितरण नभएर एक्सरे मेसिनको सो भाग काम नै नलाग्ने गरी विग्रिएको थियो । उक्त एक्सरे मेसिन मर्मतका लागि पाटपूर्जा (कन्ट्याक्टर) नै फेर्नुपर्ने भयो । जुम्लामा सो पाटपूर्जा पाउन सम्भव थिएन । एकातिर विरामीको अवस्था गम्भीर हुँदै गएको छ, अर्कातिर दुर्गम कर्णालीमा पाटपुर्जा मगाउन पनि कठीन छ । एक्सरेका पाटपुर्जा नेपालगञ्ज वा काठमाडौंवाट मगाउनुपर्छ । अन्तिम प्रयास स्वरुप हामीले काठमाण्डौ स्थित एउटा सर्जिकल हाउसमा सम्पर्क गरी तत्काल सामान पठाईदिन अनुरोध ग-यौ ।
त्यो सामान कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आउन जति समय लागे पनि गणेशसँग कुर्नु र श्रीमतीको प्राणरक्षाको लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्नुको विकल्प थिएन । एक्सरे मेसिन विग्रेकोले उपचार गर्न नसकेको जानकारी पाएदेखि नै उनी भगवान जप्न थालिसकेका थिए । भोलीपल्टै आईपुग्छ भनिएको सामान मौसम खरावीका कारण जुम्लामा विमान अवतरण हुन नसकेपछि सो घटनाको तेस्रो दिनमात्र प्रतिष्ठानमा सामान आइपुगेको थियो । पाटपुर्जा फेर्नेवित्तिकै त्यसले काम गरिहाल्यो ।
यता मनमाँयाको अवस्था झनै गम्भीर भैरहेको थियो । उनका श्रीमान् गणेश सुकेको ओठ र भक्कानिएको छाती वोकेर यताउता गरिरहेका थिए । मानिसहरुको वाक्लो भीड थियो एक्सरे कोठा अगाडी । एक्सरे विभागले दिनको ३ वजे मात्र मनमाँयाको एक्सरे गर्न सक्यो । एक्सरे प्रतिवेदनमा मनमाँयाको तिघ्राको हड्डी भाँचिएको देखियो र उनको सल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो । अस्पतालले करिव २ हप्ताभित्र उनको सल्यक्रिया गरेर पठायो ।
अहिले पनि मनमाँया र उनका श्रीमान गणेशले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धाउन छाडेका छैनन् । तर फरक तरिका र फरक परिवेशमा । पहिले मनमाँया डोकामा वोकिएर आएकी थिईन भने हाल उनी ठमठमी हिडेर आउँछिन् । खुट्टामा पाता राखिएकी उनी भन्छिन् “डाक्टरसापहरुले वेलावेलामा चेक गर्न आउनुपर्छ भन्नुभाको छ” ।
वोकिएर आएको वेला आफ्ना श्रीमानले पाएको तनाव र आफूले भोग्नुपरेको पीडा उनको मानसपटलमा ताजै छ । भन्छिन् – “एक्सरे मेसिन त्यो दिन नवनेको भए मेरो के हालत हुन्थ्यो होला ! हामिसँग नेपालगञ्ज÷काठमाण्डौ गएर उपचार गराउने खर्च पनि थिएन र ऋण गरेर उपचार गराउन जान मौसम खराबीले गर्दा जहाज पनि थिएन ।” त्यसो त पाटपुर्जा फेर्न महिना भन्दा बढी लाग्ने सुनेका उनका श्रीमानको पनि सातोपुत्लो उडेको थियो – सामान मगाउनु पर्ने कुरा सुन्दा ।
विरामीका आफन्तले त धन्यवाद दिने नै भए । सो घटनासँग नेपाल प्रहरी जुम्लाको छनौटको सन्दर्भ पनि जोडिएको छ । सोही समयमा कर्णाली अंचलमै पहिलो पटक नेपाल प्रहरीको छनौट भर्ना खुलेको थियो । सो छनौट प्रकृयाको लागी अस्पतालमा हरेक दिन ५० जनाको दरले छातीको एक्सरे गर्ने व्यवस्था मिलाईएको रहेछ । तर एक्सरे मेसिन विग्रीएपछि जुम्ला प्रहरीलाई भर्ना छनोट प्रभावित हुने डरले सतायो । तर अस्पतालमा रहेको वायोमेडिकल उपकरण विभागको प्रयासका कारण सो भर्ना खासै प्रभावित हुन पाएन । “त्यतिवेला प्रहरी छनौट भर्ना प्रकृया स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउनवाट रोक्नमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विशेष गरी वायोमेडिकल विभागको भूमिका महत्वपूर्ण छ”, जुम्लाका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक विष्णुहरी गौतम भन्नुहुन्छ ।
“हवाई सेवा पनि नियमित नभएको जुम्लामा अझै २-४ दिन थप मेसिन नवनेको भए विरामीको अवस्था थप नाजुक हुन सक्थ्यो र सो वापत हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनु पथ्र्यो” – अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ चिकित्सक डा. मंगल रावलको टिप्पणी छ ।